नौ समूह सकारात्क हुँदा २.०७ अंक बढ्यो नेप्से, आईपीओ मूल्यतर्फ नजिकिदै शिवम् सिमेण्ट | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण नौ समूह सकारात्क हुँदा २.०७ अंक बढ्यो नेप्से, आईपीओ मूल्यतर्फ नजिकिदै शिवम् सिमेण्ट
on: March 26, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
चैत १२, काठमाडौं (अस) । मंगलवार नेप्से परिसूचक २.०७ अंकले बढेर १ हजार १४० दशमलव ७२ विन्दुमा बन्द भएको छ । १ हजार १३८ दशमलव ४१ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक ७ मिनेटमा १ हजार १४० दशमलव १५ विन्दुमा पुगेको थियो । सो पछि परिसूचक साढे दुई घण्टासम्म घटेको हो । १ हजार १३६ दशमलव २२ विन्दुमा पुगेपछि उकालो लागेको परिसूचक बन्द हुने आधा घण्टाअघि १ हजार १४१ दशमलव १६ विन्दुमा पुगेको थियो । दश समूहको परिसूचकमा ९ समूहको परिसूचक बढेपछि समग्र नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव १८ प्रतिशतले बढ्न पुगेको हो ।
शिवमको शेयर मूल्य घटेर आईपीओ नजिक
आइतवारदेखि दोस्रो बजारमा कारोबार भएको शिवम् सिमेण्ट र यूनिर्भसल पावरको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले घटेर सर्किट ब्रेक भएको तीन दिन भइसकेको छ । लगातार तीन दिन शिवम् सिमेण्टको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले घट्दा आईपीओको नजिक पुग्न लागेको छ । कम्पनीका शेयरधनीहरुले शेयर विक्री गर्न अर्डर दिदा खरीद गर्ने केही नआएपछि लगानीकर्ताहरु चिन्तीत भएका छन् ।
प्रिमियमा आईपीओ जारी गरेको शिवमले शेयरधनीहरुको मन भने एकदिन पनि जित्न सकेन । कम्पनीको शेयर मूल्य हाल रू. ३४० मा करोबार भएको छ ।
त्यस्तै, आइतवारदेखि दोस्रो बजारमा कारोबार भएको यूनिर्भसल पावर कम्पनीको शेयर मूल्य लगातार १० प्रतिशतले घट्न पुगेको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य घटेर प्रतिकित्ता रू. २१९ मा कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयर विक्री गर्नेको संख्या अधिक भएको छ तर खरीद गर्ने कसैले चाहेका छैनन् । आफूले गरेको लगानी नै उठाउन नसकिएला भन्ने डरमा लगानीकर्ता छन् ।
मंगलवार १ सय ७१ कम्पनीको कारोबारमा ७६ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ६८ कम्पनीको घटेको छ । साथै, २७ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सेवा लघुवित्तको शेयर मूल्य ५ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता रू. ५२५ मा कारोबार भएको छ ।
नेपाल बंगलादेशका संस्थापकले १ लाख ३१ कित्ता शेयर बेचे
मंगलवार नेपाल बङ्गलादेश बैंकका संस्थापकतर्फका शेयरधनीहरुले शेयर खरीद विक्री गर्दा रू. २३ करोड २४ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयर २५ नम्बरको ब्रोकरबाट खरीद भएको छ भने ३८ नम्बरको ब्रोकरबाट विक्री भएको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. १२० मा कारोबार भएको छ । दुई ब्रोकर मार्फत १ लाख ३१ कित्ता शेयरको रू. १ करोड ५८ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
मंगलवार रू. २१ करोड १५ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलानमा कारोबार रकम रू. २ करोड १५ लाख घटेको हो । सोमवार रू. २४ करोड २६ लाखको शेयर कारोबार भएको थियो । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव ४२ अंकले बढेर २ सय ४२ दशमलव ६७ विन्दुमा पुगेको छ ।